लक्ष्मी बैङ्क लि . | गृहपृष्ठ
Home लगानी लक्ष्मी बैङ्क लि .
लक्ष्मी बैङ्क लि .
मुख्य कार्यालय : आदर्शनगर, वीरगञ्ज
कर्पोरेट कार्यालय : हात्तिसार, काठमाडौं
स्थापना : २०५८ चैत
सीईओ : सुमन जोशी
अध्यक्ष : राजेन्द्र खेतान
शाखा सङ्ख्या : २९
संस्थापक शेयर : ५५.४२
नागरिक लगानी कोष : ९.०२
साधारण शेयर : ३५.५६
नेपालको चर्चित औद्योगिक घराना खेतान समूह र बैङ्किङ क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूको संलग्नतामा २०५८ साल चैतमा यो बैङ्कको स्थापना भएको हो । स्थापना कालदेखि नै नयाँ तथा विभिन्न आधुनिक बैङ्किङ र वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको यो बैङ्क नेपालमा मोबाइल बैङ्किङ भित्र्याउने पहिलो वाणिज्य बैङ्क हो । सो सेवामार्फत आफ्नो मोबाइल फोनबाट नै एउटा व्यक्तिको खाताबाट अर्को व्यक्तिको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्न, रकम झिक्न र राख्न पनि सकिन्छ । त्यसैगरी, नेपाली बैङ्किङ प्रणालीमा मर्जरको शुरुआत गर्ने श्रेय पनि यही बैङ्कलाई जान्छ । स्थापना कालदेखि नै शेयरधनीहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको यस बैङ्कले आव ०६६/६७ का लागि १३ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको थियो । गत आव ०६७/६८ को मुनाफाका आधारमा यस बैङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफदर पनि गत आवभन्दा बढी हुने सम्भावना देखिएको छ ।
यस बैङ्कको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यको ट्रेण्डलाई प्राविधिक विश्लेषणको औजार आरएसआईद्वारा विश्लेषण गर्दा यसको शेयरमूल्य अहिले न्यूट्रल जोनमा रहेको देखिन्छ । यस कम्पनीको शेयरमूल्यका आधारमा बनेको आरएसआई रेखा अहिले स्केल ३० र ७० को बीचमा रहेकाले न्यूट्रल जोन भनिएको हो । आरएसआई चाटको प्रकृति हेर्दा यो बैङ्कको शेयरमूल्यमा एकदमै उतारचढाव भएको अवस्था देखिन्छ । सन् २०११ को शुरुआतदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा यो बैङ्कको आरएसआई रेखा स्केल ६९ देखि २९ को बीचमा तलमाथि गर्दै आएको छ । त्यसका साथै यस बैङ्कको शेयरमूल्य प्रत्येक दिनको कारोबारमा पनि धेरै नै घटबढ हुने गरेको छ । यस बैङ्कको आरअएआई रेखा हाल स्केल ५० तिर उन्मुख देखिएकाले शेयरमूल्यमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसैका आधारमा यो बैङ्कको शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ताहरूले केही कारोबार अवलोकन गरेर निर्णय गर्नु उत्तम देखिन्छ । त्यसैगरी बैङ्कले आव ०६७/६८ का लागि दिने प्रतिफल सार्वजनिक गर्ने बेला नजिकिँदै आएकाले यो बैङ्कको शेयर विक्रीकर्ताहरूले केही समय प्रतीक्षा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
आव ०६७/६८ को अपरिष्कृत तेस्रो वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कको चुक्ता पूँजी रू. १ अर्ब ६१ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, आव ०६७/६८ कै अपरिष्कृत तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणसम्ममा बैङ्कले रू. २८ करोड खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । सो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिभन्दा १३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले बढी हो । साथै, यस बैङ्कको जगेडा कोष पनि अघिल्लो आवको सोही अवधिका तुलनामा ३४ दशमलव ८१ प्रतिशत वृद्धि भएर हाल रू. ९७ करोड ९६ लाख पुगेको छ । त्यसैगरी बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन पनि अघिल्लो आवका तुलनामा ४ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेर हाल रू. १७ अर्ब ५६ करोड पुगेको देखिन्छ । तर, सो अवधिमा बैङ्कको कुल लगानी भने १७ दशमलव ६६ प्रतिशतले कम भएर हाल रू. २ अर्ब ६१ करोडमा सीमित भएको छ । यसरी बैङ्कको लगानीमा आएको ह्रासले वार्षिक मुनाफादरमा सामान्य प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, सोही अवधिमा बैङ्कको ऋण प्रवाह ९ दशमलव १७ प्रतिशतले वृद्धि भएकाले लगानीमा भएको कमीका कारण कम हुने नाफा यताबाट परिपूर्ति हुने सम्भावना छ ।
• यस बैङ्कका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरूमा क्रमिक रूपमा सुधार भइरहेको छ । विगतका वर्षमा तुलनामा यसको प्रतिशेयर आम्दानीमा वृद्धि भइरहेको छ भने मूल्य-आम्दानी अनुपात पनि स्वाभाविक तहमा नै रहेको छ ।
• यस बैङ्कको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा नियमित रूपमा कारोबार हुने भएकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्न खासै समस्या पर्ने देखिँदैन । त्यसले गर्दा आफूले चाहेको समयमा बजारमा प्रवेश गर्न र त्यँहाबाट बाहिरिन लगानीकर्ताहरूलाई सहज नै हुनेछ ।
• यो बैङ्कको शेयर कारोबार हुँदा मूल्यमा धेरै नै उतारचढाव आउने गरेको छ । यसले गर्दा सट्टेवाजहरूले यो बैङ्कको शेयरमा लगानी गरेर छोटो समयमा नै मुनाफा कमाउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
• गत आवको तेस्रो वित्तीय विवरणअनुसार यस बैङ्कको मुनाफा दरमा वृद्धि भइरहेको छ । यो क्रम चौथो त्रैमाससम्म पनि निरन्तर रहेमा यसपालि बैङ्कले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्ने प्रतिफल दर गत वर्षभन्दा केही वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ ।